IATA dia mankasitraka ny tolo-kevitry ny komity vonjy maika WHO
Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » IATA dia mankasitraka ny tolo-kevitry ny komity vonjy maika WHO
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Namporisika ny fanjakana hanaraka ny tolo-kevitra momba ny dia iraisam-pirenena avy amin'ny Komitin'ny vonjy taitra iraisam-pirenena momba ny fahasalamana momba ny fitsapana sy fitantanana loza mety hitranga mandritra ny areti-mandringana COVID-19
Aza mila porofon'ny vaksiny ho fepetra fidirana
Ampiharo ny fomba mifandrindra, voafetra ara-potoana, miorina amin'ny risika ary porofo mifototra amin'ny fepetra ara-pahasalamana mifandraika amin'ny fifamoivoizana iraisam-pirenena
Ataovy lohalaharana ny fanaovana vaksiny ho an'ireo tantsambo sy ekipa an-habakabaka
The Fikambanam-pitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) nanentana ny fanjakana hanaraka ny tolo-kevitra momba ny dia iraisam-pirenena avy amin'ny Fitsipika Iraisam-pirenena momba ny fahasalamana (2005) Komity vonjy taitra momba ny fitiliana sy ny fitantanana ny risika mandritra ny areti-mandringana COVID-19. Manokana, IATA dia nanasongadina ireto toro-hevitra manaraka ireto ho an'ny fanjakana:
"Aza mila porofon'ny vaksiny ho fepetra fidirana."
Mino ny IATA fa ny fahalalahana mamakivaky sisin-tany dia tsy tokony ho voafetra ho an'ireo afa-vaksiny ihany. Manohana ny governemanta manokatra sisin-tany ho an'ireo vita vaksiny anefa izy io ary ny fitiliana dia tokony hanana andraikitra lehibe ihany koa amin'ny tsy mety fanaovana vaksiny. Ny fiarahana-fitiliana sy ny fanaovana vaksiny - no fepetra lehibe hiarovan'ny fanjakana soa aman-tsara ny sisin-tanin'izy ireo ary hamerina ny fahalalahana mihetsika raha mitantana ny loza mety hitranga amin'ny fahasalamam-bahoaka COVID-19.
“Ampiasao ny fomba voarindra, voafetra ara-potoana, miorina amin'ny risika ary porofo mifototra amin'ny fepetra ara-pahasalamana mifandraika amin'ny fifamoivoizana iraisam-pirenena."
IATA dia manohana mafy ireo fepetra miorina amin'ny risika hitantanana soa aman-tsara ny dia iraisam-pirenena. Ny ankamaroan'ny mpahay siansa dia mino fa hanjary endemika ny COVID-19 ary mila mianatra miaina miaraka amin'ny viriosy ny fiarahamonina. Ny indostrian'ny fitaterana an'habakabaka dia mitarika risika marobe — teknika, voajanahary, geopolitika sns. — Hitazonana asa azo antoka. Mifanaraka amin'ity tolo-kevitra ity, IATA dia manohy miantso ny governemanta hiara-hiasa amin'ny indostria hametraka drafitra hampifandray soa aman-tsara ny olony sy ny toe-karenany amin'ny alàlan'ny fitaterana an-habakabaka mifototra amin'ny mari-pahaizana mazava momba ny fanokafana sy ny fitsapana / fanaovana vaksiny mba hitantanana risika.
"Ahena ny vesatra ara-bola ho an'ireo mpandeha iraisampirenena amin'ny fepetra toy ny fitiliana, fanokanana / karokantine ary fanaovana vaksiny, mifanaraka amin'ny andininy faha-40 amin'ny lalàna mifehy ny fahasalamana iraisam-pirenena."
Mino tanteraka ny IATA fa ny fepetra ara-pahasalamana notendren'ny governemanta hitantanana ny loza mety hitranga amin'ny COVID-19 dia tsy tokony ho sakana ara-bola amin'ny fivezivezena. Nanaiky ny fanjakana fa ny vidin'ny fepetra tsy maintsy atao toa ny fitiliana dia tokony ho entin'ny governemanta ao amin'ny Andininy 40 amin'ny Fitsipika Iraisam-pirenena momba ny fahasalamana. Tsy tokony hohadinoina amin'ny areti-mandringana io. Miaraka amin'ny vidin'ny fanandramana PCR amin'ny US $ 100 any amin'ny farany ambany sy ny fitakiana fitsapana marobe amin'ny dia iray, dia mety hahatonga ny sidina tsy ho zakan'ny isam-batan'olona sy ny fianakaviana izany - ny fanodinana ny fandrosoana am-polony taona maro mba hahafahan'ny fahalalahana mandeha lavitra kokoa. Toy izany koa ny fepetra amin'ny quarantine izay andidian'ny governemanta.
“Ataovy lohalaharana ny fanaovana vaksiny ho an'ny tantsambo sy ny tantsambo.”
IATA dia manohana mafy ny tolo-kevitra tokony hatao laharam-pahamehana ho an'ny vaksinin'ny rivotra. Hiaro ny ekipazy sy hiasa mafy amin'ny fomba mahomby izy io. Zava-dehibe tokoa izany mandritra ny krizy ho an'ny rojom-pamokarana eran-tany amin'ny fitondrana vaksinina, fanafody ary fitaovam-pitsaboana ilaina hiadiana amin'ny viriosy.
Sidina avy any Milan mankany Rovaniemi amin'ny easyJet izao